Itoophiyaan seera haasaa jibbinsaafi odeeffannoo sobaa tamsaasuu dhorkuufi to'atu tumachuuf - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan seera haasaa jibbinsaafi odeeffannoo sobaa tamsaasuu dhorkuufi to'atu tumachuuf
Manni Maree Ministeerotaa Itoophiyaa Kora Idilee isaa 75ffaa Onkoloolessa 09, 2019 taa'een seera haasaa jibbinsaafi odeeffannoo sobaa tamsaasuu dhorkuufi to'atu ilaalchisee wixinee qophaa'erratti mariyachuun akka ragga'uuf mana maree bakka bu'oota ummataaf dabarseera.
Akka ibsi mana maree ministirootaa agarsiisutti, rakkoo tatamsa'uun haasaa jibbinsaafi odeeffannoo sobaa qaqqabsiisu seerawwan biyyattiin yeroo ammaa qabduun furuun waan hin danda'amneef wixinee labsii dhimma kanarratti Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa qopheesserratti gadi fageenyaan mariyateera.
Manni maree ministirootaa," Haasaan jibbinsaafi odeeffannoon sobaa tatamsa'uun jireenya hawwaasummaarratti, tasgabbii siyaasaa, tokkummaa biyyaa, kabaja namoomaatiif, akkasumas sab-daneessummaatiif gufuu guddaa'ta'uu" ibseera.
Manni maree ministirootaa kun wixinicharratti erga mariyateen boodas waan sirreeffamuu qaba jedhurratti yaada kennuun akka ragga'uuf Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatif erguu beeksiseera.
Itti dabalataan ibsi kun, "Sababii haasaa jibbnsaafi odeeffannoo sobaa tatamsa'aa jiru kanaan keesumaa yeroo ammaa kana dudhaan hawaasa gidduu jiru dhabamee nageenyi biyyaa yaaddaa keessa galuu," eereera.
Manni Maree Ministirootaa walga'ii idilee isaa 75ffaa gaggeessen kanaan murteewwan addaddaa kan biroos abarseera.
Wixinee dambii ittiin bulmaata Raayyaa Ittisa Biyyaa kanaan duraa lakkoofsa 385/2008 fooyyessuuf, Ministeerri Raayyaa Ittisaa Itoophiyaa qopheessuun mana marichaaf dhiyeesserratti mari'atee, waan foyyaa'uu qaba jedhu erga yaada kennee booda murteessera.
Dambii hundeeffama Faawundeeshinii Raayyaa Ittisa Biyyaa Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaas qopheessuun dhiyeesserratti mari'atee, yaada foyyeeffamuu qaba jedhame erga dhiyaateen booda hojiirra akka oolu murteessera.
Kana malees, manni maree ministirootaa kora isaa kanaan wixinee labsii naamusa sirna bulchiinsa Federaalaa Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa qopheesserratti erga mari'ateen booda akka ragga'uuf Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatiif dabarsuu beeksiseera.
Wixinee labsii mootummaan Itoophiyaafi Riippabliikni Jabuutii toora gaazii uumamaa dabarsuuf waliigalanirratti mari'achuun Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa akka raggaasisuuf dabarseera.
Mootummaa Naannoo Oromiyaa: ''Odeffannoo sobaaf ESAT seeraan gaafanna''
Oduu jette jetteen namoonni saddeet Baangilaadeshitti ajjeefaman